Usuku Lomhlaba Lwesimo Sezulu 2017 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla usuku olukhetheke kakhulu lwezazi zezulu: yi Usuku Lomhlaba Lwesimo Sezulu. Usuku okukhunjulwa ngalo umsebenzi wakhe ekusatshalalisweni kwezixwayiso zakuqala ezivikela abantu kwizimo zezulu ezimbi kakhulu. Ngaphandle kwalaba bachwepheshe, ukulahleka kwempilo yomuntu bekungaba kukhulu kakhulu kunanamuhla.
Ngokusobala, akufanele kube khona, kepha ngenxa yalokhu basebenza nsuku zonke ukuze babikezele kusengaphambili ukuthi izenzakalo ezahlukahlukene zizokwenzeka nini futhi kuphi ukuze abantu babe nesikhathi esanele sokuthatha izinyathelo.
1 Kungani kugujwa usuku lomhlaba lwezulu?
2 Yimiphi imisebenzi ezokwenziwa?
Kungani kugujwa usuku lomhlaba lwezulu?
Ngaphezudlwana nje kwengxenye yekhulu leminyaka eyedlule, Ngosuku olufana nanamuhla ngo-1950 i-World Meteorological Organisation yadalwa (OMM) sibonga isivumelwano lapho amazwe kanye nezindawo ezingama-30 zifinyelele esivumelwaneni sokusabalalisa izexwayiso ngezimo zezulu ezimbi kakhulu.
Yilona kuphela i-ejensi egunyazwe yiNhlangano Yezizwe ukuthi inikeze imininingwane esemthethweni ngesimo sezulu nesimo sezulu, kanye nokuxhumana kwabo nomhlaba nezilwandle.. Kulo nyaka ingqikithi ithi "Ukuqonda amafu", njengoba lokhu kubaluleke kakhulu njengoba kuxhumene nezimo zemvelo zendawo ngayinye.
Yimiphi imisebenzi ezokwenziwa?
Ngesikhathi se- # WorldMeteorological Day i-State Meteorological Agency (AEMET) ushicilele imihlahlandlela emine etholakalayo kunoma ngubani ofuna ukuzilanda:
Umhlahlandlela Wokuhlonza Okuvamile Wamafu
Umhlahlandlela wokuhlukaniswa kwamafu ophakeme
Umhlahlandlela Wokuhlukaniswa Kwamafu Ophakathi
Umhlahlandlela Wokuhlukaniswa kwamafu okuphansi
Ngaphezu kwalokho, balayishe ifayela le- ikhalenda lapho ungabona khona izithombe zamafu amangalisayo.
Endlunkulu ye-AEMET kuzoba nengqungquthela emafwini ngo-11,55 ekuseni, nguMnu Rubén del Campo, uMnu Fernando Bullón noMnu José Miguel Viñas. Isaba esihle sokufunda kabanzi ngamafu.
Usuku olujabulisayo, izazi zezulu!
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Usuku Lomhlaba Lwesimo Sezulu 2017